Mitohy hatrany ny fijerena ifotony ataon’i Lanto RAKOTOMANGA miaraka amin'ireo mpiara-dia aminy eto amin'ny Boriborintany faha II, koa tato Morarano no nanatontosana izany ny herin'andro lasa teo. Nitafa sy nijery ny fahasahiranana misy ato Morarano ireto farany. Maro tokoa ireo olana izay misy ety anivon’ny fiarahamonina ety. Raha ny momba ny zaza dia betsaka ireo tsy mandeha any an-tsekoly noho ny fahasahiranana eo amin’ny tokantranon’izy ireo, nanambara ity kandida ho solombavambahoana ity fa Zo ary koa fototry ny fampandrosoana ny fahalalana, koa hampiana ireo zaza handeha any an-tsekoly.
lundi, 29 avril 2019 09:34
Kaominy Nikoly Fokontany Ambovotoka: Nanampy amin'ny fanamboarana Fiangonana i Masy Goulamaly
Tonga nanatitra hazo hatao Pann hoan'ny Fiangonana Katolika, teto amin'i Kaominy Nikoly, Fokontany Ambovotoka ny fikambanana AMM, izay tarihin'i Ramatoa MASY GOULAMALY. Marihina fa efa Fiangonana 20 no vitan'ny Fikambanana ato anatin'ny Distrikan'i Tsihombe, FLM sy Katolika ka ifanampiana amin'ireo mpino. Nanolotra ihany koa bodofotsy hoan'ireo beantitra ity Kandida ho solombavambahoaka eto amin'ny Distrikan'i Tsihombe ity. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 29 avril 2019 09:32
Marofototra Mananjary: Tonga nitsidika ny mponina i Anthelme RAMPARANY
Nitety ireo Kaominina eto amin'ny Distrikan'i Mananjary ny Kandida ho solombavambahoaka Anthelme RAMPARANY RAMANANA, anisan'izany ny taty Marofototra. Nifanakalo hevitra ny zava-misy iainan'izy ireo, ity Solombavambahoaka teo aloha ity moa dia tsy vahiny amindreo satria Zanak'ambanivolo izay mitondra ny hetahetan'ny mponina ary mitondra vahaolana hatrany. (Jereo Sary tohiny)
Sary: Aban'i Candice
Fanadiovana ny Bazaribe no safidy androany sabotsy 27 aprily, hanamarihana ny « Tagnamaro ». Vao tamin’ny 6 ora maraina dia efa raikitra ny fanadiovana sy fanalana ireo fakobe. Mitarika izany ny avy amin’ny Distrika, Kaominina ambonivohitr'i Vangaindrano, Delegen'ny serasera sy ny kolontsaina. (Jereo Sary Tohiny)
Aorian’ny fanadiovana ny toeram-piasana dia hanamboatra ny làlana miditra ao amin'ny Lycée Technique Ampasampito anio ny fianakaviamben'ny Ministeran'ny Fanajariana ny Tany, ny Toeram-ponenana sy ny Asa Vaventy, anatin’ny hetsika Tagnamaro. Ny EPP Ambohipo - Antananarivo kosa no hisitraka ny fanadiovana hataon’ny Ministeran’ny serasera sy kolontsaina. (EPP Ambohipo - Jereo sary Tohiny)
jeudi, 25 avril 2019 11:42
Toamasina I: Manohy ny fitetezana ireo fokontany i Naharimamy Irmah
Manohy hatrany ny fitetezana ireo fokontany eto Toamasina I ny kandida ho solombavambahoaka Irmah Naharimamy. Nanomboka ny alatsinain'ny Paska izy dia efa niaraka tamin'ireo tanora teny amorom-pasika sy Pangalanes, nanome fialam-boly ho an'ny rehetra, nanohana ireo tanora tia fanatanjahan-tena. Notohizany teo amin'ny Dépôt Anjoma izany fitsidihina izany, ny tao Trano mora, ny tao Tanamakoa 12/12 11/12 11/13 ary nipaka hatrany Mangarivotra.
jeudi, 25 avril 2019 10:58
Andravoahangy Andrefana: Nitondra tsiky sy fanantenana i Bodo
Nahita maso ny fahasahiranan’ny mpiarabelona aminy ao Andravoahangy Andrefana, Boriborintany fahatelo - Antananarivo Renivohitra, i Bodo, mpihira. Nitsidika tokantrano izy, niaina, namantatra, nihaino ary nitafa tamin’ny olona anatin’ny fitetezana Fokontany toy ny teto Andravoahangy Andrefana mampahafantatra fa kandida anatin’ny rodoben’ny mpanangana amin’ny fifidianana solombavambahoaka ny tenany, miaraka amin’i Feno Ralambomanana ary tsara tsodranon’ny antoko Tiako i Madagasikara sy ny filoha nasionaly Marc Ravalomanana. Nitondra tsiky sy fanantenana ho an’ny olona i Bodo ary nanazava ny maha zava-dehibe ny fifidianana solombavambahoaka fa tsy foana akory ny fanantenana, vao ny « aller » izay no vita. (Jereo Sary Tohiny)
Antotanisa tamin’ny febroary 2019, io navoakan’ny Amnesty International. 14 067 miandry fitsarana any am-ponja ka lehilahy ny 55 % amin’ireo. Nisy fitomboana be io tarehimarika toarian’ny oktobra 2017, izay nahatratra 11 703 ireo notazomina am-ponja vonjimaika miandry fitsarana nanerana ny Nosy. Ny fonja eto Madagasikara anefa tsy mahazaka voafonja mihoatra ny 10 600. Midika izany fa feno hipoka, tsy zarizary ary mijaly ny voafonja eto Madagasikara. Marihina fa ny 25 aprily 2019 ny Andro afrikanina ho an’ny fitanana am-ponja vonjimaika.
Tontosa tamim-pirahalahina androany teto Barikadimy ny famindram-pitantanana teo amin'i Pr Velo Jérôme, filohany Oniversiten’i Toamasina teo aloha, sy ny Pr Zafitody Conscient filoha vaovao, natrehan'ny Tale jeneralin’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Ny fifanankalozana sy fifampiresahana ary fifandeferana no politika entin'ny filoha vaovao mitantana ny Oniversiten’i Toamasina ; ny filoha teo aloha kosa nilaza fa be ny zava-bita tamin’ny fanatsarana ny Oniversiten’i Toamasina, isan'izany ny biraon'ny « Présidence » sy ny tranon'ny mpianatra ary ny efitrano fianarana, teo koa ny fanokafana lalampiofanana roa vaovao dia ny Physique Chimie sy ny Maths - Informatique.